Wholesale XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Easy Set Up uye Storage, kusanganisira Wheeled Carry Bag Manufacture and Factory |XGEAR
XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Nyore Kugadzika uye Kuchengeta, kusanganisira Wheeled Carry Bag
XGEAR Pop Up Canopy tende 10' x 10' yakagadzirwa nesimbi nesimbi.Iyo furemu inodzivirira ngura uye yakafukidzwa nehupfu, izvo zvinoita kuti pop up canopy igare kwenguva refu, yakasimba uye yakachengeteka.
Shandisa chero kwaunoda.Kubva kumapikiniki, mapato, nzendo dzemisasa, zviitiko zvepaki, kumisika yevarimi, bhizinesi diki uye zvichingodaro, canopy iyi inoshanda zvakakwana uye inopa nzvimbo yakakura kumhuri yako neshamwari.
● 10x10 Instant canopy inopa 100 square feet yemumvuri kuvanhu gumi nevashanu, yakakura kudarika yakawanda yekunze.Nzvimbo yakakura yemumvuri yemusika wenhata, bato, mahombekombe, bhizinesi, chiitiko chenharaunda uye chero kushandiswa kwekunze.
● Iine yakazara One-Piece furemu mune yakakwirira geji yakasimba simbi yakasimba, XGear canopies inomiswa mumasekonzi pasina maturusi anodiwa.Tora iyo yakazara yakaunganidzwa furemu nepamusoro kunze kwebhegi, dhonza vhura, wedzera makumbo uye wapedza.
● Inopa dziviriro yakanaka kubva kuZuva, Mhepo, Mvura uye mamwe mamiriro ekunze.Kuvakwa kwemhando yePowder-coated Steel Frame uye Durable Canopy Cover: Iyo canopy yepamusoro yakagadzirwa nesirivheri yakavharwa jira, inovhara 99% yekukuvadza kweUVA neUVB mwaranzi kubva kuchiedza chezuva, Inodzivirira Mvura uye inogara kwenguva refu kushandisa.Arch top to against mvura inounganidza;nekumira mamwe mamiriro emhepo ane kuchengetedzwa kwe4 tie down mitsara uye 8 simbi dzesimbi (kwete kuisiya iyo mumamiriro ekunze akaoma).
● Inosanganisira 1 x canopy top, 4x tambo, 1 stake bag ine 8 stake, furemu uye bhegi rekutakura rine mavhiri.
Main Material UV sirivheri yekuputira polyester
Color Yakasviba Girezi/Green/ Beige/Silver/Bhuruu
Item Dimensions L120 x W120 x H111 inches
Item Weight 19.25KG
Carton size L50x W11 x H9 inches (1pc/bhokisi)
CartonGros Weight 20KG
● UV sirivha yekuvhara pamucheka kumashure inopa UPF 50+ kudzivirira, uye chimiro chacho chakagadzikana.
● Inotakurika uye iri nyore kutakura nekuirongedza mubhegi redu repamusoro rinorema rorora rine mavhiri & mibato yedehwe.
● Kugadziriswa kwegumbo rakarurama kunogona kupa nzvimbo yakawanda.
Zviri nyore kuseta uye kuchengetedza, uye yakanakira kushandiswa kwekunze:
Zviripyakakwana yemitambo yekunze, chiitiko, mutambo, flea musika, bato, mahombekombe, nhandare yekutamba.
Uye yakanakira magadheni ako, kuseri kwemba, patio,yeRV kufamba uye mapikiniki.
Ndokumbirawo muwedzere yeduMesh Screen Zippered Wall Panels kudzivirira kunetsa kubva kumhutu, uye kuwana nzvimbo yakasununguka.
Zvakapfuura: Speed ​​​​Agility Training Set neTPE Ladder yekusimba uye kudzidziswa nhabvu
Zvinotevera: XGEAR Yakaderera Seat Yakareruka Kupeta Beach Chair ine Yakakwira Back Mesh Kumashure